Uyenza njani i-gif kwividiyo: iinkqubo kunye nokusetyenziswa | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Encarni Arcoya | 14/06/2021 15:55 | Ukuhlaziywa ukuba 14/06/2021 15:58 | Amaqhinga
Kuya kusiba yinto eqhelekileyo kuthi ukurekhoda iividiyo. Kodwa kananjalo ukuba sifuna ezo vidiyo zibe luhlobo lokubonisa indlela esivakalelwa ngayo. Ingxaki kukuba ayinguye wonke umntu owaziyo ukwenza i-gif kwividiyo. Ngaba kwenzeka kuwe?
Ukuba awukwazi ukuba ungayenza njani, kwaye uyayidinga ngokungxamisekileyo Guqula ividiyo ibe yi-gif, nantsi siza kukunika iindlela ezahlukeneyo, kuba azinakwenziwa kuphela kukusetyenziswa; kukwakhona ukuba awuyidingi.
1 Zithini ii-gifs zoopopayi
2 Uyenza njani i-gif kwividiyo: ukhetho onalo
3 Uyenza njani i-gif kwividiyo eneenkqubo
4 Uyenza njani i-gif kwividiyo eneapps
4.1 Img Dlala
4.3 UMenzi weGIF
5 Uyenza njani i-gif kwividiyo ngaphandle kweapps
Zithini ii-gifs zoopopayi
Xa kuziwa ekufundeni ukwenza i-gif kwividiyo, into yokuqala ekufuneka uyicacisile yile: luhlobo luni lwe-gif esithetha ngalo. Njengoko uyazi, i-gif yifomathi yomfanekiso. Inobunzima obungaphantsi kwe-jpg, eyona isetyenziswa kakhulu, kwaye kwangaxeshanye yenye yezo zikuvumela ukuba ube nemvelaphi ebonakalayo. Kodwa kukwakho nee-gifs zoopopayi.
Ezi zi Iziganeko zoopopayi ezenziwe kwilog engapheliyo. Umzekelo, cinga ukuba unencwadana yokubhala kwaye kwiphepha ngalinye uzobe umlinganiswa ohamba kwiphepha ngalinye. Ukuba uzithatha zonke kwaye uziswayipha ngokukhawuleza, ziya kujongeka njengevidiyo, akunjalo? Ewe, yile nto i-gif yoopopayi emalunga nayo. Yindlela yokuhambisa intshukumo kwimifanekiso okanye kwizakhelo.
Nangona kunjalo, ngoku, iividiyo zinokusetyenziselwa ukwenza ii-gifs zoopopayi.
Uyenza njani i-gif kwividiyo: ukhetho onalo
Nangona siza kuphuhlisa nganye ngezantsi, kuya kufuneka uyazi ukuba iizipho zoopopayi, okanye yintoni enye, ukwenza i-gif ngokuhamba (nokuba yimifanekiso okanye ngevidiyo) kunokufezekiswa:
Ngokusetyenziswa kwewebhu, zombini iifowuni eziphathwayo kunye neekhompyuter.
Ngeenkqubo zoopopayi. Uninzi lwazo (ezilungileyo) ziyahlawulwa kwaye ukuba uza kuzisebenzisa kuphela kwinqanaba lomsebenzisi oko akukufanelekeli ukuphuma ngaphandle.
Ngeenkqubo zasimahla ezinemisebenzi esisiseko.
Uyenza njani i-gif kwividiyo eneenkqubo
Zininzi iinkqubo zokuhlela ividiyo. Nomfanekiso nawo. Kwimeko apho ufuna ukwenza i-GIF yevidiyo, kuya kufuneka uthembele kule yokugqibela ukuyiphumeza. Ke ngoko I-Gimp, i-Photoshop kunye nezinye ezifana nezo ziya kuba zezona zikhetho zixhaphakileyo onokukhetha kuzo, Nangona zikhona ezinye ezinokusebenza ezinje nge-ImgFlip Gif Creator, iMicrosoft GIF Maker, Recordit Fast Screencast, Shout ...
Eyona ixhaphakileyo, ngakumbi kuyilo, yiFotohop, kuba inokwenziwa ngokulula. Amanyathelo ngala:
Vula ividiyo kwi-Photoshop. Ukwenza oku, kuya kufuneka uye kwiifayile / ukungenisa / ukuzoba ividiyo kwisakhelo (isakhelo ukuya kumaleko).
Emva koko ulungelelanise umgangatho. Kubalulekile ukuba ividiyo oyenzileyo ayiyiyo inde kakhulu, kodwa yimizuzwana embalwa. Ngaphandle koko, ukongeza ekubeni unzima kakhulu, usenokungabi nayo imemori yokuyihlela.
Uyenza njani i-gif kwividiyo eneapps
Ewe usetyenziso lokwenza i-GIF kwividiyo, inyani kukuba kukho iindlela ezininzi onokukhetha kuzo. Phakathi kwezi sizincomayo zezi:
Ifumaneka kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android, unokwenza i-gif evela kwividiyo okanye kwiifoto ezininzi. Ukongeza, ikuvumela ukuba uyihombise ngeetekisi, izitikha, izitikha, amacebo okucoca ulwelo kwaye wenze ezinye zezinto ezizodwa ezenza ukuba ubambe okhethekileyo.
Siyayithanda kuba ikwavumela ukuba ukhethe ukuba sifuna i-GIF idlale rhoqo okanye kube kanye.
Kule meko, uMama usithathela ingqalelo kuba, nangona unokwenza i-GIF kwividiyo okanye kwiifoto, into elungileyo kukuba unokongeza umculo ongasemva. Inemisebenzi efanayo nezinye iinkqubo zokusebenza, ezinje ngokubhaliweyo, izitikha, iziqwenga zokusika, njl. kodwa iaudiyo yeyona nto inokutsala umdla wakho.
Kulula ukuyiqonda. Sisicelo apho, xa usifaka, sikuvumela ukuba ulayishe ezinye iifoto okanye ividiyo ukusika into onomdla kuyo. Kulula kakhulu ukuyiphatha eya kuthi ikwenze, kwimizuzwana nje, wazi ukuba ungazenza njani uninzi lwazo.
Into elungileyo yile Ikwanedatha ye-GIFs, ke ukuba awufuni kuzikhathaza ngokuyila, ungahlela oyithandayo ngeetekisi, imizobo okanye izitikha kwaye uyisebenzise njengetemplate yokwenza into entsha.
Eyona nto imbi kukuba ngamanye amaxesha babeka iintengiso kuwe, kodwa kufanelekile ukulinda (kunye nokuginya intengiso) ukuba uyisebenzisa rhoqo.
Ewe, isicelo sokuthumela imiyalezo ngoku sikuvumela ukuba wenze i-gif kwividiyo. Ukwenza oku, kuya kufuneka ucofe ikhamera, apho ufota khona ngaphakathi kwesicelo.
Bamba ukwenza ividiyo, emva koko utyale ngokwaneleyo ukwenza i-gif (iya kukubonisa kwinxalenye yokusikwa). Inyani yomcimbi kukuba ividiyo ye-GIF ingaphantsi kwemizuzwana emithandathu.
Ngoku, uza kuthini ukuba ufuna ividiyo evela kwigalari? Akukho ngxaki, ubetha igalari ukuze uncamathisele ividiyo kwaye izakhelo ziya kuvela. Kwakhona ukhetha ukulandelelana okufutshane (ngaphantsi kwemizuzwana emithandathu) kwaye ungayenza.
Uyenza njani i-gif kwividiyo ngaphandle kweapps
Emva kwako konke oku kungentla, unokungafuni ukuba naziphi na iinkqubo. Kwaye awufaki zicelo okanye ulayishe ividiyo yakho kwiiwebhusayithi ezingaphandle apho ungazi ukuba baya kwenza ntoni ngayo kamva.
Ke, ukhetho osele nalo kukufunda ukwenza i-gif kwividiyo ngaphandle kokusebenzisa nantoni na. Ewe kunokwenzeka. Ngapha koko, licebo elingaziwayo, kodwa elinokusetyenziswa njengokulungisa.
Ukwenza oku, uya kuthi kufuneka ulayishe ividiyo yakho kwiYouTube. Apho unokukhetha ukuba wabelane. Kodwa eyokufaka, ukuthumela nge-imeyile kunye neGIF. Kwaye kulapho uzokwazi ukuyenza ngaphandle kwesidingo sokwenza enye into. Ewe kunjalo, gcinani engqondweni ukuba ayizizo zonke iividiyo ze-YouTube ezinokhetho; Oko kukuthi, ayizukuvela kuzo zonke, kodwa uya kuyibona kwezinye.
Kwezo zikushiyayo, kufuneka ukhethe kuphela xa ufuna ukuba iqale kwaye iphele. Iya kukuvumela ukuba ungeze isicatshulwa kwaye, ekugqibeleni, ngokunqakraza ku "Yenza i-GIF", uya kuyifumana kwimizuzwana embalwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Uyenza njani i-gif kwividiyo